musha AFRICAN STARS Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Dai 1, 2017
LB inopa Nyaya Yese yebhokisi yebhokisi inonyanyozivikanwa neNickname; 'Chapman'. Mikel Obi Yenyu Yenyu Hwehuduku pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Ngatitange.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu
John Michael Nchekwube Obinna anozivikanwa saJohn Obi Mikel, John Mikel Obi kana Mikel John Obi akaberekwa musi we 22nd April 1987 muna Jos naPaul Michael Obi, mushumiri wehurumende uye amai, Mai Irosu Obi, bhizimisi.
Mikey sekuzivikanwa anozivikanwa mumazuva ake ehuduku aiva mwana akafanirwa kukudzwa nguva refu vasati arova kurarama. Sezvo mwanakomana wemushandi mukuru wehurumende, akagadzirisa hupenyu hushoma kwechikamu chikuru chehuduku hwake. Akanga ane tarenda, mafungiro uye kutsungirira. Izvi ndizvo zvinomusundira mukukura.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Kuti rwendo rwebhora rakatanga sei
Izvo zvose zvakatanga apo tarenda yake yakatanga kuwanikwa pamatope anotamba mutambo webhokisi yeJos Metropolis Township Primary School yaakaenda. Akatanga kuonekwa naAlhaji Babawo Mohammed Adam, murume mupfumi uye mutambi wenhabvu uyo ​​aigara akavharidzirwa.
Mukubvunzurudzwa kwega, izvi ndizvo izvo Alhaji Babawo Mohammed Adam akataura;
"Ndinogona kutaura pasina kupikisa kuti ndini iye munhu akamuwana (John Mikel Obi) paakanga achiri mwana. Ndakamutsigira nenzira dzakawanda dzekuti ave iye nhasi. Akanga ari kutamba mumugwagwa pedyo neguta rangu kwandakasarudza ndokumubatsira. Ndakarangarira zuva rokutanga randakaona, ndakamushevedza ndikamuudza nezvandakaona maari. Ndakasarudza kumubatsira sezvo mhuri yake yakanga isingagutsikani kumutsigira, iye akazarura.
Zvikwereti zvakawanda hazvina kumbopiwa basa rekukosha iro Adhamu akatamba mubasa raObi rakangotanga. Kunyange zvazvo asina kumbobvhiringidzika, sezvaanogara achitaura kuti ane telepathic kunzwisisa kwezvinhu.
Maererano neAlhaji Babawo Mohammed Adam
"Mikel anowanzoshevedzera kuti atsvake mazano, uye ini ndinomupa zano pamusoro pezvandinoziva kuti zvichava zvakanaka kwaari zvose mubasa rake nezvimwe nyaya. Zvechokwadi, akambokurukura nezvematambudziko ake kuCentral uye haana kushamisika nekufamba kwake kuChina. Zvechokwadi, vanhu vazhinji vane maonero akasiyana asi Mikel murume akanaka chaizvo; iye munhu akachengetwa, ane dzimwe nguva uye ane ushamwari. Uye ndiye chete mutambi wandinoziva uyo anoremekedza shamwari dzake dzekare uye achiripo navo kusvikira zuva. Ndiye mumwe munhu anofarira kubatsira muduku-ane ropafadzo uye neshamwari dzake, zvikurukuru shamwari dzake dzekare ".
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Mikel uye runako rweRussia, Olga Diyachenko vave vachifambidzana kubvira 2013 mushure mokunge vasangana naye muLondon.
Pamusangano wavo, Mikel akakurumidza kuda murudo naOlga Diyachenko Alegra baba vavo vari muRussia mabhiriyoni ane maketani emabhizimisi muLondon. Anodada mambokadzi weRussia akanaka pakugadzira kudya kweNigeria.
Mikel Obi, Wife / Girlfriend nababa, hama Inlaws
Ukama hwake naye hwakatanga nguva pfupi mushure mokunge apedzisa ukama hwake hwekugara kwenguva refu nevekuzivikanwa yeve Nigerian Delta Soap Beauty Queen, Sandra Okagbue.
MuNigerian model, actress uye muzvinabhizimisi anobva kuAnambra nyika ndiye mukuru wevana vatanhatu uye mwanasikana wekupedzisira Obi (King) weOnitsha, Nigeria Ofala Okechukwu Okagbue.
Aimbova Miss Delta Soap beauty pageant ye2010 yakarongwa neArror Drug.
"Iyo shiri mbiri dzinodanana dzave dzichifambidzana kwemakore anenge 3 kamwechete dzakasarudza kuvhara ukama hwavo. Kushamwaridzana kwavo kwakanyanya kusimba pazuva iro Sandra aifanira kutamira kumudzimai weCentral muimba yake yeku UK.
Tilldate, hapana anoziva zvakakanganisika pakati pemhando mbiri idzi. Uye hakuna munhu anoziva kuti ndiani akaputsa mwoyo wake uye nei Mikel akasarudza kugadziririra mupfumi akanaka mupfumi. pakarepo mushure mekunge vakaparadzana, Sandra akakurumidza kuparidzira chikamu chakareba chichiramba ukama hwake neyeredzi yebhola.
Maererano naye, "Izvi ndezvokuzivisa mukuru ruzhinji rwevanhu kuti nyaya dziripo iye zvino zvichitaura nezvechato chakarongeka pakati pangu, Sandra Okagbue, naMikel Obi, hazvina kukwana. Hakuchina kumbove nekugadzirisa kwakadaro pakati pevamwe vedu kusarega chibvumirano, kana kunyange a musi wechato se rumored. "Hazvina chokwadi mumishumo yokuti Mikel Obi neni tiri kuchata."
"Pakave nenhau dzakawanda dzakawanda pamusoro pangu mune mapepa, uye mabhuku akawanda. Zita rangu rave rakabatanidzwa nevanhu vanoverengeka vandinofananidza kuti vanobatanidzwa ne. Dzimwe dzedzidziso dzenhema dzakatoenda kusvika pakureva kuti imba yangu yemhuri yakatengwa neiyi kufungidzira vatsigiri. Izvi zvinoodza mwoyo. Ini ndinobva kune munhu ane mbiri mhuri yemhuri uye, isu tiri vanhu vanoshanda nesimba. Takawana zvose zvatine nazvo kutenda muna Mwari uye kushanda nesimba. "
"Ndinoda kukumbira madzimai anoremekedzwa uye vakuru vepepanhau kuti vafadze nguva dzose voratidze zviri pamutemo chero chii zvacho ruzivo vangada kuparidzira pamusoro pangu ndisati ndaparidza. "
"Ndinokutendai nokuda kwekusigirwa kwako."
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Kugara naOlga
Mikel mushure mekuparadzana kwake akafambidzana nekufambidzana nevekuNigeria vasikana muhukama hwakasununguka. Aifanira kugara nemunhu waanofunga kuti aizoita kuti ave nerunyararo rwepfungwa uye kushungurudzika kuduku zvikuru pamusoro pekuda mari kubva kunyika yake. Izvi zvakaitika apo bhiriyoniire mwanasikana waOlga akapinda muupenyu hwake.
Maererano naMikel."Mweya wangu unonyemwerera mumoyo mangu uye mwoyo wangu unofadza kuburikidza nemoyo wangu. Ndapedza kuparadzira fuma inofadza mumoyo wangu wakasuruvara ". VaNigeria vazhinji zvikuru vakadzi vanoda kumubata sezvo murume wavo akanzwa akasuruvara pakusunungura Mikel kune mudzimai mutsvuku. Zvisinei, vamwe vanoramba vachiziva kuti nei akaita sarudzo yakadaro.
Sezvo vazhinji vari muNigeria vaizoisa, - Zvinonzwisisika kuti kana vanhu vakafuma, vavanoda ndezvekuunganidza hupfumi panzvimbo yekugoverwa kwepfuma. Vanowanzoenda kune mumwe murume akapfuma kuti vadzivise tsika yavo yekugovera fuma yavo kune varombo vomumhuri. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Mikel sokunge vazhinji vangati.
Mikel naOlga vakura pamwe chete semhuri kubvira pavakasangana muLondon. Vakadzidzisa pachavo kuti vadzidze sei kubva kune mumwe nemumwe uye kuti havazombofi vakazvipira ivo pachavo.
Vose mapato akasarudza kuva nemwana mukutsvaga kugadzira chisungo chisingaperi. Kunze kwezvavakatarisira kwakauya vanasikana vaviri.
Mushure mokudzoka mumudzi kubva kuchipatara uye ndakabvunzwa neshamwari nezvekuti anonzwa sei kuva nevanasikana vaviri, Mikel akarara pasi, achiisa maoko ake pamusoro pavo akati izvi zvinotevera;
"Kuva nemapatya, kunoita kuti uone zvinhu nenzira dzakasiyana. Yaro seyokuwa murudozve ".
Mia naAva vakakurira kuti vave iwe jewel mumeso evabereki vavo.
Mikel Obi Daughters, Ava naMia
Kuona ivo vachikura kunofema. Muzvokwadi, Mashoko haana kukwana kuti aratidze rudo rusingaverengeki Mikel ane mhuri yake.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Baba Kidnap
Baba vaMikel, Pa Obi vakambodzingwa nemasoja maviri eNigeria avo vakakumbira £ 2.4 bhiriyoni kuti vadzikinure.
Masoja acho aiva eboka revarwi rakanga rakagadzirirwa kuchengetedza Jos, guta rakakurumbira rinotambudzwa nechisimba uye zvechitendero. Asi panzvimbo yekuchengetedza runyararo, mauto akashandisa motokari yemotokari kuti amise Michael Obi sezvaaidhonza kumba kubva kubasa ndokumudzinga.
Izvi ndizvo zvakaitika chiitiko maererano nemukuru wemapurisa, VaAyeni vakati;; - Masoja akaudza Mai Obi mutungamiri wavo aida kumuona. Pasina kutya, akaenda kundosangana nomukuru wemauto muvan. Vakakurumidza kumuendesa kunzvimbo yakasviba yaakarohwa zvikuru. Kumubata kwaiva kuisa kutya maari iyo yaifunga kuti yaizoita kuti negiotiation iende zvakanaka. Vatsva vacho vakaudza Mr Obi "kuvapa $ 4bn (£ 2.4bn), iyo yavakatsanangura se'kuchi kuchinja 'kuna Mikel, Chelsea yake club uye inonyanya kukosha, muridzi wayo Roman Abrahimovic. Ndinofunga kuti Chelsea FC yakanga yakawanda kwazvo panguva iyoyo, Ayeni akati .. Varume vangu vakaparadza chivande cheKano apo vanokunda vaibata baba vaMikel, vachimusunungura uye kusunga vatanhatu vakafungidzirwa kuti vaidya vaisanganisira musikana wechikadzi.
Mikel Obi baba vevana
Mikel akati kubatwa kwake kwakamuvhundutsa nokuti mhuri yake haina kumbova nematambudziko ikoko.
Pa Obi akaudza vatori venhau kuti:
"Kune vashanu vavo uye vakanga vakapfeka junifomu dzehondo. Pavakasvika kwavari kuti varatidze mapepa emotokari yangu, vakabva vandisundira mumoto yavo vakavezwa mumavara ehondo ndokutanga kutyaira motokari.
Handina kumboziva kuti motokari inogona kubhururuka saiyo.Iyo ndiyo yakauya mupfungwa dzangu kuti ndakanga ndapambwa. Pakarepo ndaiziva kuti kwaiva kubatwa, ndakatanga kuvakumbira kuti vawane ngoni, asi vakaramba vachirova uye vakandirova pasina tsitsi. Vakandichengeta munzvimbo inotyisa. Ini ndichiri ndisingazivi kuti ndakatsungirira sei. "
Munguva yekusara kwababa vake, Mikel akanga ane simba zvakakwana kuti adzokere kutamba Chelsea - kutanga kutarisana neSteke City uye West Bromwich Albion. Paakaona baba vake vakanga vasunungurwa, akakurumidza kuenda kuInternet kunotenderera munhu wose muNigeria, mhuri yake neshamwari, Chelsea FC uye vateveri vavo nevatsigiri vake nekuda kwekusigirwa kwavo munguva iyi inotyisa.
Chelsea mumiririri Andre Villas-Boas akakurudzira "Kushamisa kwekufunga kwepfungwa" inoratidzirwa nemuzhinji mukati mekupambwa kwababa vake.
A Chelsea muchitaura zvakare akati: "Mikel akaratidza kuzvipira kwakanaka uye unyanzvi munguva iyi yakaoma nguva dzakawanda, uye kirabhu icharamba ichipa rubatsiro rwakakwana kwaari uye nemhuri yake."
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama neNigerian Ladies
Mikel inonzi inoratidzirana nehuwandu huwandu hwema celebs uye husingazivikanwi vakadzi vanobva kuNigeria.
Mikel Obi uye Genevieve- The Untold Story
Mikel Obi naGenevieve Nnaji vakatanga hukama hwavo hwekushanda apo vose vari vaviri vakasayinwa naAmstel Malta sevamiririri. Mikel akataura nezvekuvhara kwemavhariji kuti abvise kufambidzana nevepanhau panguva yechiitiko chakagadzirirwa kuNigeria Breweries brand muLagos.
"Tishanda pamwe chete, ihwo hukama hwekushanda". "Takabvumira Amstel Malta pamwe chete, iye munhu akanaka kwazvo; Ndakataura naye kazhinji uye iye munhu akanaka kwazvo. "
Mikel Obi akambonzwa runyerekuro kuMukaro Rita Dominic.
Maererano nevakawanda vakaona mapikicha avo, vanoita sevanopfuura shamwari dzepanyama.
Akambomhanya ari oga kuBudja mushure mekunge rimwe zuva mutambo wezuva kuCalabar kumuona. Zvose izvi zvakave zvichionekwa kaviri pashure. Vaya vaviri vakambomira mufananidzo, izvo zvakaita kuti dzimwe nendimi dzidzungirire kuti nyeredzi mbiri dzive dzakanaka pamwe chete uye kuti dzinogona kuva mutsara wakanaka, kutonga nechikamu chemufananidzo.
Kune vazhinji veNigeria, hazvigoneki kuti vaviri vacho vangoerekana vapindirana mune imwe nguva sezvo vazhinji veNigeria Nollywood vanoyevedza vave vari muLondon vasina kumhanya kune ani zvake achirega Mikel anogara ane zvirongwa zvakasimba.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Instagram kushorwa neJeus Nigerian Girls
Neshungu Nigerian Masikana anoshandisa kutuka musikana waMikel (Olga) pa Instagram. Mikel ishungu huru yevakadzi vazhinji vekuNigeria uye chaizvoizvo havana kufanana nekuti iye akaenda kune mudzimai mutsvuku.
Zvakare mudzimai wake paakamutumira achidya spaghetti nemumwe wemapatya ake, vasikana vokuNigeria vakatora chimwe chikonzero chekurwisa. ona pasi apa;
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Pachivande Kubereka Vana Vaviri
Izvo zvave zvichinzi Mikel Obi ave baba vakavanda kune vana vaviri mushure mehukama hwepedyo nevakadzi vaviri. Mishumo inoti ane mwana wekare nemwanasikana muduku uyo ​​waanovanza kubva kune vanhu vose. Moreso, akambenge atenga £ 500,000 akavharirwa muLondon nokuda kwemukomana wake uye amai vomukomana.
Uyewo, mumwe mwana wake akavanzika, mwanasikana nemukadzi wake weC23 ane makore anonzi anogara kumaodzanyemba kweEngland. Kunyange zvakadaro vakadzi vaviri vanonzi havazivi nezvemumwe.
Zuva musi weSvondo rimwechete rakataura kuti Mikel akasangana namai vomwanakomana wake pamutambo muLondon. Mushure mokunge abereka mwana, tsime racho rakati, Mikel 'akabvumirana kumupa makumi ezviuru pagore mukusimudza' uye 'akabvuma kumupa motokari itsva makore matatu kusvika mashanu.'
'Akati iye aida kuita basa muupenyu hwavo. Iye nemmai vari muhukama uye iye haave nemanzwiro akaipa pamusoro pake, zvichida nokuti iye akamutarisisa zvakanaka. '
Shamwari yepedyo kumwana wavo amai kamwechete yakati: 'Haasi kubva mumhuri yakanaka uye haawani mari iye zvino, asi anotyaira mumotokari itsva. Anoratidzika kunge akapinda mari kubva pakuva nemwana mukomana. Isu tiri munharaunda tinoziva kuti ave achichengetedza zvakaderera. '
Zvisinei, mutauriri webhokisi anotsanangurwa neSuva musi weSvondo sezvaakati: 'Iyi inyaya yakanyanyisa. John anopa uye anotarisira vana vake uye acharamba achidaro. Anokumbira kuti kuvanza kwavo kuremekedzwe. '
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Kusarura VaNhau veNigerian
Paari "akazvitutumadza, asingaremekedzi uye asingabvumi"
Mikel Obi: "Handisi kutsamwa neNigerian Media apo dzimwe nguva vanonyora zvakashata, zvakafanana nevari kungoita basa ravo. Vanoda kutengesa mapepa avo. Handiiti Mikel haisi chinhu kunze kwekuti vanhu vachiona Mikel pamapeji epamberi emapepa, vanoenda kundotenga uye ndinofunga kuti vari kuita mari yakawanda kubva ipapo.
"Ndinoda kutaura nevepanhau asi ini ndinoda kana zvinhu zvikaitwa zvakanaka, ndinoda kutaura kune vepanhau asi ini ndiri munhu anoshingaira uyewo ane purogiramu zvakare, haugoni kuuya kwandiri uye uchiti Mikel Ndinoda kubvunzurudza iwe, zvinhu hazvina kuitwa nenzira iyo, kana zvinhu zvikaitwa zvakanaka, ndicharemekedza vanhu, ndichaita bvunzurudzo, asi kana zvinhu zvisingagadzirwe zvakanaka, hazvikwanisi kundichingana pandinopinda mahofisi ehotera , iwe unosangana neni mumigwagwa uye unoti ndinoda kutaura newe, hazvishandisi saizvozvo".
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Nhauriro dzine vane 5 Bentleys
"Chinhu chimwe chete ndechokuti handiendi muNigerian Papers, kwete sekuti handina hanya asi akandiidza, Agent yangu akandidana, aive kuNigeria uye akati kwandiri pane mhepfenyuro kuti ndine Bentley's mashanu, Ini ndakafanana neiyo, zvishanu Bentley, ndichaitei neChishanu Bentley, ivo vose motokari imwe chete kana vari kutaura kuti ndinogona kuva nemarudzi mashanu mavara ipapo.
"Ndinofunga kuti inopisa kusvikira iwe uri kuita zvakanaka chaizvo, kana zvinhu zvichikufambira zvakanaka, unova izvo vanhu vasingatarisiri kuti iwe uve, izvo vanhu vasingatarisiri kuti zvibudirire, unoziva kuti nguva dzose ive makuhwa achibhururuka pano neapo,, zvose zvinotarisa kuti unozvichengetedza sei iwe kunyange zvakadaro, iwe unozvidzivirira kubva kune zvinhu zvisina kunaka kwauri, ndinoda kutamba mutambo uyu kwenguva refu, ndinoda Chelsea, ndichada kuti ndipedze Basa Rangu pano paCentral asi zvinoenderana nezvinoitika, uyo anouya uye anoenda, iyo ibhora, tichaona zvichaitika mune ramangwana. "
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Kubvuta Nigerian Celebrity
Mikel akambomupomerwa nekunyunyutika kunonzi Nigerian Music Legend, 2face kuburikidza nekuramba ruoko rukazununguka mukirabhu kuLondon. Maererano neNigerian pepanhau.
"2face yakasangana naMikel pachikwata cheLondon usiku, uye akaramba achiratidza mutambi wacho achida, asi Mikel anomuramba. Izvi zvakamutsamwisa. 2face akanzwa kurwadziwa zvakanyanya, akapinda mu studio uye akaisa mhete yake pamusoro pemakisi. "
Rwiyo rweMimhanzi rwakaenderera mberi kusunungura rwiyo rwakatumidzwa "ini chete" izvo zvaiva nazvo mumashoko ake muNigerian PIDGIN mutauro achiti (kwete be everybody sabi play ball). It ine ENGLISH MEANING; (Havasi vose vanoziva kutamba bhora).
Makore anoverengeka pasi apa, 2Face, mubvunzurudzo ichangobva kuitika naBrila FM, vakavhara runyerekupe rwechiitiko ichocho chichiitika nguva dzose uye vakasimbisa kuti rwiyo rwacho rwakanga rusingambove rutsva kana Mikel. 2 Baba akaratidzawo kuti paakanzwa nezvenhepfenyuro panguva iyoyo, akaisa nhare kuburikidza nepakati pemaestro maestro uye vakapedzisira vaine kuseka pamusoro pemhepfenyuro.
Akati: "Panguva yandakaita rwiyo urwu, Mikel akanga aine dambudziko nekukwanisa kwake kuratidza mitambo yakadaro yeSupp Eagles, saka imwe nhepfenyuro yakawanda monger yakatora rwonzi kubva kuimba yangu pamusoro penyaya yekuita zvekuda kuratidza mucheche weNational football uye yakamhanya nenyaya wepakati pakati pedu, ndakataura naMicel patafura uye taive nekuseka kuseka pamusoro payo. "
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Dhakwa Kutya Nyaya
Mikel akanga asina kukodzera kutamba mumutambo sezvaaishumira kusimiswa. Akasarudza kubuda kunodya iyo yaidya pakati pemakiromita mana nemashanu ewaini mushure mekutarisa boka rake kutamba paStfordford Bridge.
Akawanikwa ari kaviri kamuganhu paakamira nemapurisa mumusika wake weRange Roger muFulham Road, kumadokero kweLondon. Mutongi Weruwa Jeremy Coleman akamurambidza kubva kumotokari kwemwedzi ye15 ndokumuraira kuti abhadhara £ 1,580 kuWest London Magistrates 'Court.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Michael / Mikel Mistake
Panguva yekugadzirira 2003 FIFA Pasi-17 World Championships, Nigerian Football Association yakanganisa kutumira "Michael" se "Mikel" yemutambo muFinland.
Akasarudza kuchengeta zita idzva, achitaura kuti rakange rine chindori chaiyo. Pana 31 July 2006, akataura kuti anoshevedza kunzi Mikel John Obi panzvimbo yaJohn Obi Mikel, sezvaaiwanzoidzwa. Izvi zvinosanganiswa zvinofanirwa kugamuchirwa mupasipoti yake.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Basa Rokutanga
Akazotanga basa rake rebhodhi panguva ye12 apo akasarudzwa semutambo wekambani ane tarenda anopfuura 3000 matarenda kuti atambe mukurumbira wePepsi Football Academy.
Pepsi football academy yakanga iri boka iro panguva iyoyo chaiyo raizivikanwa zvikuru nekufamba-famba kuNigeria kutsvaga zvakanakisisa kubva kune zvese zviri kuuya mune dzimwe nyeredzi, matarenda mashoma kuti gare gare iende kune imwe nzvimbo yepamutambo. Kare ikozvino Obi akamira kune vose vanoona. Akasarudzwa kuti atambe muchechi yepamusoro-soro Plateau United akazivikanwawo nekuita nyeredzi kubva kune vatambi saCelestine Babayaro, Victor Obinna, Chris Obodo nevamwe vazhinji vakaenderera mberi kutamba mumakwi eEurope uye vachimirira nyika yavo mushure mekuita mabasa avo. Gare gare akazivikanwa saJohn Obi Mikel, akanga achiwana zvinyorwa zvenyika yake paFIFA Pasi-17 World Championships yakaitwa muFinland. Akazoendesa kuChamber Africa club Ajax Cape Town, Lyn muNorway vasati vasangana neCentral FC. Zvose zviri nhoroondo.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Muzhizha re2005, Mikel akatamba Nigeria kuFIFA World Youth Championships yakaitwa muNetherlands. Akanga ane nhanho yakanaka kwazvo kusvika Nigeria yakasvika pakupedzisira, kwavakarasikirwa ne2-1 kuArgentina. Akakunda Silver Ball mushure mokuvhota mutambo uyu wechipiri mutambi mutsva.
Mikel akakunda U-20 Silver Football mushure mokuvhota mutambo uyu wechipiri-mutambi mutsva mu2005. Akakodzwawo nemuAfrica Young Player wegore mukomborero mu2005 uye 2006. Yakanga iri Lionel Messi uyo akakunda muchengeti mutsva uye mubayiro wepamusoro.
Mikel Obi- Zvakaita sei zvose
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Kupesana Kudhindwa kuEngland
Musi wa 29 April 2005, mazuva mashomanana mushure meMikel akatendeuka 18, Premier League club Manchester United yakaratidza kuti yakanga yatora chikamu neCorop club yeLyn Oslo kuti isayine mutambi. Webhusaiti yeUnited States yakataurawo kuti vakanga vaita chibvumirano zvakananga nemukomana uye kuti akanga asayina chibvumirano chekubatana navo.
Mikel's agents vakadarika sezvo boka racho rakakurudzira wechidiki kuti asayine kontrakiti yemakore mana pasina mumiririri. Lyn Oslo akataurirana kuti akatumira fax kune vashandi vake kune dzimwe nyika, vachitsvaga kuti mabasa avo akanga asingachadiwi naMikel. Mishumo inoti iyo yekutengesa yakanga inotora £ 4 mamiriyoni, uye yaizoona mutambi wacho achisvika ku Old Trafford munaJanuary 2006.
Rival Premier League, Chelsea, gare gare yakabudisa mvumo yekutsanangurira kuti inenge iine chibvumirano naMikel nevashandi vake, asi Lyn Oslo akaramba kudai. Zvisinei, nhepfenyuro inotevera yakaratidza kuti Chelsea inonzi yakabatanidzwa mukuronga kuti mutambi wacho aende kuEurope achifunga kuti amusayine pane imwe nguva inotevera. Chimwe chimwe chinhu chakawedzerwa pane izvozvi mushure mekunge zvaratidzwa kuti mutambi uyu aifadza mutevedzeri weBenorge Jose Mourinho paaidzidzisa nekambani yebato reboka boka munguva yechando ye2004.
Mikel akarondedzera kufara kwake nekubatana neUnited in alytily arranged press conference, kwaaifananidzirwa akabata mutsara weManchester United, uyo akatakura nhamba ye squad 21.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Apo Going inosvika Tough
Mushure mokunge asayina chibvumirano chekubatana neManchester United, kune zvirevo kubva kuNorway kuti akanga agamuchira mamiriyoni ekutengesa foni kubva kune zvisingazivikanwi. Mikel akapiwa muchengeti uye akatamira kune hotera yakachengeteka. Zvisinei, musi waMay 11, 2005, muteveri wacho akashaya mumutambo weNorway Cup neKlemetsrud; akanga asina kusarudzwa pamutambo asi akanga ari kutarisa kubva kumire. Kunyange zvazvo mutambi wacho akatendwa kuti akasiyira nomumwe wevarume vake, John Shittu, uyo akanga ava kutarisana kuzosangana naMikel, kuparara kwake kwakaita kuti vanhu vakawanda vauye kuNorway uyewo vakatsvaga mapurisa pashure pokunge mutungamiri weLyn Oslo Morgan Andersen aiti mumutauro weNorway kuti Mikel akanga 'atorwa' '. Izvi zvinonzi zvakapedzisira zvadzokororwa nemutungamiri weManchester United, Carlos Queiroz, uyo akapomera Chelsea nezvekubatwa kwekuti "kukunda".
Izvozvo zvakazobuda kuti Mikel akanga adzokera kuLondon pamwe nemushandi wake John Shittu. Mutungamiri weManchester United Alex Ferguson akafunga kuenda kuOslo kunoshanyira Mikel, asi akasarudza kupikisa izvi mushure mokunge Mikel akaudzwa kuti akasiya nyika. Achigara muhotera yeLondon, uye mamwe mazuva mapfumbamwe mushure mekunge apera, Mikel akataura pamusoro pe Sky Sports News kuti akanga akamanikidzwa kupinda chisangano neUnited States, anotaura zvakashata neAlex United uye Lyn Oslo. Mikel zvakare akataura kuti akanga akumbira makirabhu kwevhiki kuti afunge nezvazvo, asi kuti chikumbiro ichi chakarambidzwa uye mapoka acho akamanikidza kuti asayine pasina vadzidzisi vake varipo. Zvinotaurwa naMikel, kana zviri zvechokwadi, zvinoreva kuti Manchester United yakanga yaita zvakapesana nemitemo yeFIFA uye FA. Mikel akaudza mabhizimisi eBrithani kuti Chelsea ndiyo kambani yaaida chaizvo kunyora. Mukupindura kwezviitiko izvi, United yakagadzirisa hurumende kune FIFA pamusoro pemafambiro maviri eCentral uye vashandi vemauto, John Shittu uye Rune Haunge, vakatotadza kushingaira kwebasa rake muGeorge Graham kusungurudzwa kwehurumende. FIFA yakarambidza zvirevo izvi munaAugust 2005 zvichiti hapana hutano hwakakwana hwekuunza mhosva yeCentral.
Achitevera mutambo uyu, Mikel akakundikana kudzokera kuLyn Oslo, uye kirabhu yakaisa chikwereti neFIFA. Musi waAugust 12, 2005, FIFA yakatonga kuti Mikel anofanira kudzokera kuLyn Oslo kuti aone chibvumirano chake neCorclub club, apo ivo vangasarudza pane imwe nguva zuva kana chibvumirano chaakatina neUni chichifanira kutsigirwa kana kubviswa. Mushure mokunge kunonoka kwepamwedzi, Mikel akateerera chibvumirano cheFIFA ndokudzokera kuLyn Oslo kutanga kweSeptember 2005 mushure memwedzi mitatu isipo. Panzvimbo pokusiya FIFA kuti asarudze kuti chibvumirano chechibvumirano chakasayirwa neManchester United, Chelsea inopindira nokuzvipira kugadzirisa saga yekuendesa kuburikidza nekutaurirana neLyn Oslo neManchester United.
Musi waJune 2, 2006, Chelsea, Manchester United uye Lyn Oslo vakasvika pakagadzirisa kuti vagadzirise ramangwana reyo mutambi. Kubviswa kwaMikel kwaifanira kutamiswa kubva kuLyn kuenda kuCentral; Manchester United yakabvumirana kugumisa chisarudzo chavo chisarudzo naMikel. Pasi pemitemo yesungano iyi Chelsea yakabvumirana kubhadhara Manchester United £ 12 mamiriyoni, hafu yaibhadharwa pakapedzisa kontrakiti uye imwe hafu munaJune 2007, uye Lyn £ 4 mamiriyoni, hafu iyo inobhadharwa kamwe nehafu munaJune 2007. Somugumisiro wekugadzirisa uku, zvose zvinotaurwa munyaya iyi zvakabviswa. Musi waJuly 19, 2006, Chelsea vakagamuchira mvumo yebasa kumutevedzeri wemapurisa mushure mekunge vapedza mamiriyoni eE16 muShona 2006.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Passing Record
Akanga ane chikwata chekupedzisa kupera kwe89.93% pamakore ake ekutanga e3 kuCentral. Izvi zvakakwirira kudarika ani zvake ari musarudzo yekutanga pamusoro penguva iyoyo.
Kwemakore matatu, ndiye akanga ari mutambi wakanakisisa mumutambo wekutanga uyo asina kumbobvira arasikirwa nemabhora mazhinji. Akanga ari iye akanakisisa mukufamba kwenguva pfupi.
Mikel Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -LifeBogger Rankings
Chapman isimba muchinzvimbo chake. Iwe haana kuwana chikwereti chakawanda nokuda kwebasa raanoitira tende rake. Tinokupa kuputsika kwezvikwata zvake pasi apa.
Nyasha yekuverenga Mikel Childhood Story Plus Untold Biography chokwadi. Ndapota chengetera kuti uwane mamwe magwaro angangokufarira.